Ciqaabta ugu badan ayaa laga dalbaa qabanqaabiyaasha xafladaha sharci darrada ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Ciqaabta ugu badan ayaa laga dalbaa qabanqaabiyaasha xafladaha sharci darrada ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Shirka Warka Warshadaha • News • Waajib ah • Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Ururka cawayska ee cawayska ayaa sheegay in shirarka sharci darada ah kaliya ay ciqaabaan warshadaha ayna dib u dhigaan furitaankooda
Biyo la'aanta adduunka ka jirta ee nolosha habeenkii waxay sababtay kor u kac muhiim ah xafladaha sharci darrada ah ee Sannadka Cusub, iyada oo aan wax yar laga qaadin tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada. Xisbiyada sharci darada ah ee inta badan istaagay intii ay ahayd inay noqdaan habeenka ugu muhiimsan ee warshadaha sanadka ayaa ka dhacay Faransiiska, Spain, UK, iyo USA. Inkasta oo inta badan dadka adduunka ay ku jiraan xayiraad adag oo xagga bulshada ah, Faransiiska, in ka badan 2,500 oo qof ayaa isugu soo baxay xaflad iyo Isbaanishka, 300 oo qof ayaa dowladda Catalonia u oggolaatay inay xafladeeyaan in ka badan 36 saacadood. Aan ku xuso, UK, aagga England ee kiisaska ugu badan ee coronavirus ee Essex sidoo kale waxay ku yeesheen kulan sharci-darro ah guri weyn oo 4 milyan ginni ah.
Sababtaas awgeed, ayaa Ururka Caalamiga ah ee Nolosha Habeenkii (INA) waxay weydiisaneysaa maamulada xukuma iyo sharciyadeeda, waxay raacdaa oo ciqaabtaa qabanqaabiyeyaasha xisbiyada sharci darrada ah iyo kaqeybgalayaasha ciqaabta ugu badan.
Faransiiska ayaa jeelka loo taxaabay ee lagu tuhunsan yahay inuu abaabulay NYE rave
Faransiiska Mas'uuliyiinta ayaa xabsiga u taxaabay isla markaana dacwad ku soo oogay mid ka mid ah tuhmanayaasha abaabulaya munaasibad sharci darro ah oo loogu talagalay sannadka cusub oo ay ku soo urureen 2,400 oo qof oo ka soo horjeedda xayiraadaha adag ee hadda saaran muwaadiniinta. Rave wuxuu ka dhacay gobolka Brittany oo ku yaal waqooyiga-galbeed ee Faransiiska, isaga oo ururiyey qaar ka mid ah 800 oo gawaari ah oo ay la socdaan ka soo qaybgalayaasha illaa Spain, Talyaaniga, iyo Poland iyadoo laga qaadayo 5 euro gelitaanka. Qofka looga shakisan yahay qabanqaabiyaha ayaa lagu hayaa xabsiga halka kuwa kale oo looga shakisan yahay qabanqaabiyeyaashana wali lagu raad joogo, waa uu beeniyay ku lug lahaanshihiisa ururka wuxuuna sheegay in uu "gacan uun gacantiisa ku bixiyay".
Dowladda Catalonia waxay u oggolaaneysaa 36 saacadood oo rave u dhow Barcelona
Xubinta INA ee xiriirka la leh Spain, Isboortiga Nolosha Spain iyo ururkeeda la shaqeeya ee Catalonia FECASARM, ayaa ka qeyb qaatay dacwada sharciga ee la furay taasoo ka dhalatay dabaaldeggii “rave” oo ay la socdeen in ka badan 300 oo qof oo aysan jirin wax badbaado ama nadaafadeed ah oo ka dhacay 36 saacadood meel u dhow Barcelona, ​​Spain. Gobolka Catalonia ee Isbaanishka, nolosha habeenkii ayaa gabi ahaanba la xiray oo isu imaatinka sanadka cusub waxaa lagu koobay 10 qof. Deriska iyo naxdinta dadweynaha, sharci fulinta ayaa guriga ka saaray 36 saac ka dib markii ay bilaabeen inay ka fogaadaan “iska hor imaad suura gal ah” oo u dhexeeya sharci fulinta iyo ka soo qeyb galayaasha. Sidoo kale, qof kastaaba wuu layaabay, ma jirin baaris COVID-19 ah oo lagu sameeyay kaqeybgalayaasha laakiin weli baaritaanka daroogada iyo aalkolada ayaa aheyd.
Iyo inta Spain Nightlife ay sugeyso in loo aqbalo qeyb ka mid ah kiiska, waxaan ognahay in labo ka mid ah tuhmanayaasha la baarayo lagu sii daayay tijaabada. Qaar ka mid ah kaqeyb galayaasha ayaa ah ajaanib, dhowr Faransiis, Beljim, Holland iyo Talyaani ah.
Racfaan ka qaadashada Nolosha Isbaanishka, waxay ku doodeen in warshadaha caweysnimada ee xirfadleyda ah ay si buuxda xaq ugu leeyihiin inay qeyb ka noqdaan dacwadaha ayna codsadaan ciqaabta ugu badan ee lagu bixiyo Xeerka Ciqaabta Isbaanishka ee la xiriira qabanqaabiyeyaasha dhacdooyinka, illaa inta ay ka qayb qaadashada dhacdooyinka sidoo kale maadaama dambigooda lagu cadeeyay. Waa iska cadahay inay waxyeelo aad u daran u gaysteen muuqaalka wershadaha cawayska oo ay khatar weyn u galeen caafimaadka bulshada. Si kastaba ha noqotee, loo-shaqeeyayaasha nolol-maalmeedka rajo weyn kama qabaan fulinta wax ku oolka ah ee xukunka xabsiga ee lagu soo rogi karo qabanqaabiyeyaasha dhacdooyinka looga shakisan yahay haddii la xukumo, iyo sidoo kale fulinta bixinta wax ganaax ah.
Iyadoo aan loo aabo yeelin halista ah in la qabto dhacdooyin sharci darro ah, Nolosha Habeenkii Isbaanishka wuxuu aad uga baqayaa in dambiilayaasha lagu eedeeyo ay wajihi doonaan hal sano oo xarig ah iyagoo ku eedeysan amar diido, iyadoo aan loo eegin ganaaxa u dhigma ee gaaraya ilaa 600,000 euro fal dambiyeedka maamul ee abaabulka fal sharci daro ah, iyadoo taasi ay tahay, waxay u badan tahay inuusan jirin xukun xabsi ah iyo ganaax lama saari doono. Kuwaas oo dhami waxay ka dhigayaan ganacsiyada habeenkii inay sharci ka bixiyaan wixii ka yimaada oo ay dib u dhigaan dib u furitaankooda maadaama faafitaanka fayrasku sii socdo.
Xalka kaliya ee dhibaatadan ciqaab la'aanta, in kastoo hada ay goori goor tahay kiiska gacanta lagu hayo, wuxuu noqon lahaa Xeerka Ciqaabta Isbaanishka inuu tixgaliyo habdhaqanka la xiriira faafida cudurada iyo faafa sida dambi ka dhan ah caafimaadka bulshada. Xaqiiqdii, waddamada kale sida Mexico, Colombia, Argentina iyo Peru dambiyadaas waa la ciqaabayaa.
Sida uu sharraxay Joaquim Boadas, Xoghayaha Guud ee INA iyo Nolosha Isbaanishka, "Wakiil ka noqoshada loo shaqeeyeyaasha cawayska, waxaan u aragnaa ixtiraam la'aan in, halka dhammaan goobihii cawayska ee Isbayn ay wali xiran yihiin, kuwa kalena ay abaabulayaan xaflado sharci darro ah waddanka oo dhan iyo in dabeecadahaas si adag looma maxkamadeeyo loona ciqaabo sidii la rabay. Haddii qabanqaabiyeyaasha munaasabadda iyo ka soo qayb galayaasha si sax ah loo ciqaabo waxay ka fikirayaan laba jeer abaabulka iyo ka soo qaybgalka xafladaha sharci darrada ah iyo rave, laakiin dawladaha qaarkood waxay umuuqdaan inay si aan toos ahayn u dhiirrigelinayaan xisbiyadan sharci darrada ah iyaga oo aan ciqaabin kuwa adeegsada. ”
NYC socda socda dhulka hoostiisa COVID-19 goobta xafladda
Maqaal dhowaan lagu daabacay NY Post ayaa lagu ogaaday in goobta xafladaha ee dhulka hoostiisa ah ee magaalada New York ay socoto inkasta oo ganacsiyada aan muhiimka ahayn la xidho isla markaana kulamada bulshada la xadido. Intii lagu guda jiray sanadka cusub, Xafiiska Sheriff-ka New York wuxuu kala diray 3 dhacdooyin sharci darro ah oo aad u fara badan oo magaalada ka dhacay.
Ariel Palitz, oo ah agaasime sare oo ka tirsan xafiiska magaalada ee cawayska, ayaa waqti galiyay in uu cambaareeyo isku imaatin kasta oo dhulka hoostiisa ah oo sharci darro ah. "Waxaan lahadleynaa dad badan oo ka tirsan warshadaha oo si aad ah uga soo horjeeda xafladaha dhulka hoostiisa xilligan maxaa yeelay dhacdooyinkan ayaa qatar gelinaya nolosha dadka waxayna dib u dhigaysaa soo noqoshada goob nolol maalmeed wanaagsan leh" ayay ku tiri war ay soo saartay Post.
INA waxay dalbaneysaa in tijaabooyin tijaabo ah oo dheeri ah lagu qaado goobaha lagu caweeyo ee habeenkii la qabto
Natiijooyinka tijaabada PRIMA-CoV ee lagu qabtay Goobta Dahabka ah ee Sala Apolo, oo ku taal Barcelona (Isbaanishka) waana caabuq la'aan kaqeybgalayaasha caddee baahida loo qabo in la sameeyo tijaabo tijaabo ah inay lagama maarmaan tahay in lala kulmo dhibaatooyinka nadaafadda madax-dusha. Marka la ogaado dhibaatooyinka fayraska keenayo lana keenayo xalka suurtagalka ah waxay noqon laheyd xalka ka wanaagsan kaliya in la xiro goobaha guud ahaan loona ogolaado shirar sharci daro ah in ay dhacaan. Warshadaha cawayska ayaa xal u noqon kara aafada hadda jirta maaddaama ay noqon karto isha ugu horreysa ee lagu ogaado baaritaanka iyada oo lala kaashanayo maamulka iyo in loo dhaqaaqo sidii a gidaar-dhig si loo xakameeyo faafitaanka fayraska. Haysashada baaritaanka COVID si loo galo goobaha cawayska sidoo kale waxay heli kartaa qayb weyn oo dadweynaha ah si loo baaro markii aysan si kale u samayn lahayn, ogaanshaha natiijooyinka wanaagsan ee COVID ayaa markaa la ogeysiin karaa saraakiisha maamulka oo la soo saarayaa karantiil habboon (iyadoo ku xiran waddammada sharciyada ).